Huawei Mate 30 wuxuu iibiyaa 7 milyan oo unug laba bilood gudahood | Androidsis
Shirkadda Huawei Mate 30 ayaa iibisay 7 milyan laba bilood gudahood
Pablo sanchez | | Huawei, Mobiles
Huawei Mate 30 waa noocyo badan oo taleefanno ah oo leh dhibaato weyn, iyada oo aan la isticmaali karin adeegyada iyo barnaamijyada Google. In kasta oo ay tahay noocyo leh moodooyin tayo sare leh, sidaan ku aragnay falanqayntaada. Caqabad weyn, oo si weyn u daahisay daah-furkeedii Yurub. Iyadoo ay taasi jirto, taleefannada ayaa si fiican u iibinaya.
Labo bilood gudahood tan iyo markii la soo bandhigay, Huawei Mate 30 waxay leeyihiin soo dhaweyn wanaagsan xagga iibka. Tan iyo markii lagu dhawaaqay taas ilaa XNUMX milyan ayey iibiyeen ilaa hada. Iibinta xitaa ka sarreysa kuwii jiilkii hore ee Mate. Yaab.
Faahfaahin badan lama bixin, in kasta oo loo maleynayo in ficil ahaan dhammaan iibka Huawei Mate 30 diiradda saar Shiinaha. Tan iyo markii laga bilaabay waddanka Aasiya waxay lahaayeen soo dhaweyn wanaagsan, horey u iibisay hal milyan oo unug maalintii ugu horreysay laga iibinayo dalka.
Calaamadda tani waa war weyn, tan iyo markii la soo bandhigay, halkaasoo laga ogaaday in aysan jirin wax codsiyo ama adeegyo Google ah oo ku saabsan taleefannadan, waxaa su'aal laga keenay awooddooda suuqa. Shirkaddu waxay ku kalsoon tahay taleefannadan, macaamiisha ayaa taageeraya iyaga.
In kasta oo illaa hadda, ku dhowaad dhammaan iibintani ay ka yimaadeen Shiinaha. Uguyaraan way fiicantahay in la arko in Huawei Mate 30 ay leeyihiin iib wanaagsan, kuwaas oo ka caawiya inay shirkaddu ku sii hayso arrintan. Iyaguna wax bay ku darsadaan garaac diiwaankaaga iibka ee 2018 sida tan.
Waxay noqon doontaa mid xiiso leh in la arko sida iibka Huawei Mate 30 ay u kobcayaan bilaha soo socda. Waa noocyo leh karti, tayo sare leh, in kasta oo la'aanta adeegyadan Google iyo barnaamijyadu ay yihiin wax si cad u xaddidaya guushiisa iyo dhagaystayaasha lagu bilaabay. Waxay noqon doontaa lagama maarmaan in la arko haddii ay kudhamaadaan iibka Mate 20.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Shirkadda Huawei Mate 30 ayaa iibisay 7 milyan laba bilood gudahood
Samsung Galaxy S11 Plus ayaa ka muuqda Geekbench oo ay weheliso Exynos 9830